Chii chekuona muVicotria Falls?: Kutsvaga muraraungu mu Africa | Absolut Kufamba
Alberto Makumbo | | Updated on 15/09/2020 12:17 | vamwe
Munzvimbo iri pakati penyika dzeZimbabwe neZambia, mapopoma anoumba muraraungu, chichiita chimwe chezvishamiso zvinoshamisa zvisikwa kwete muAfrica chete, asiwo nepasi rose. Zvibvumire iwe kutsemurwa nehupenyu hunobuda Mapopoma eVhitori kuburikidza nerwendo urwu runonakidza. Uri kuuya nesu here?
1 Sumo pfupi kuVictoria Falls
2 Kushanyira Victoria Falls
Sumo pfupi kuVictoria Falls
Africa ikondinendi ine zvisikwa zvisarudzo zvinoita kuti ive yeinonyanya kufadza pasirese. Boka renyika umo safaris, makomo anoputika kana masango avo vanoumba iwo wakasarudzika muenzaniso wezviitiko. Asi kana paine nzvimbo yekushanyira kanokwana kamwe muhupenyu hwako, izvo zviri pachena kuti Victoria Falls, mapopoma emvura anosvika pamamita 108 kukwirira uye makiromita 1.7 paupamhi nenzira yekusvetuka kubva murukova Zambezi rwizi pakati penyika dzeZimbabwe neZambia.
Chinhu chechisikigo chave chinhu chikuru chinokwezva panguva yekuenda kune imwe yenyika mbiri dzakapfuura kana iri pedyo neBotswana, Namibia kana South Africa, yekupedzisira iri iyo inopa musanganiswa wakanakisa wendege kana zvasvika pakutsaukira kuchishamiso ichi che mvura noupenyu.
Akawanikwa kuMadokero nemuongorori weScotland David Livingstone, uyo akafunga kuvatumidza mazita mukukudza Mambokadzi Victoria, mapopoma acho anonzi Mosi-oa-Tunya, anonyanya kuzivikanwa se "utsi hunotinhira." Nzvimbo iyo mushure mekuziviswa Nhaka yehupenyu neasco Muna 1989, yakatanga kuratidzira kwayo kumepu yevashanyi umo Victoria Falls yakabatanidzwawo seimwe yeiyo Zvinomwe zvakasikwa Zvishamiso zveNyika.
Iwe ungade here kuziva kuti zvinonzwa sei kana iwe ukaswedera kune iri rakakura rimi remvura?
Kushanyira Victoria Falls
Nzvimbo dzekutanga kana uchishanyira Mapopoma ndidzo maguta eVictoria Falls, muZimbabwe, uye Livingstone, guta guru reZambia. Nzvimbo mbiri idzi dzinogona kuswededzwa zvakakwana sekuwedzeredzwa parwendo rwekuSouth Africa, semuenzaniso, kana nenzira yakatenderedzwa panguva yechiitiko mukondinendi yeAfrica.
Nzvimbo mbiri dzinopokana inova ndiyo yakanakisa kana zvasvika pakuwana akanakisa maonero epanzvimbo yemvura. Zambia inoonekwa seyepamusoro sezvo ichipa maonero ari nani nepo kuona kubva kuZimbabwe kwakanyanya kunetsa nekuda kwehuwandu hwemakore emvura anoumbwa pamawere ari pedyo. Nekudaro, nyika mbiri idzi dzakanakira kusarudza pekugara mune rimwe remaguta avo ari padyo uye kusarudza kuti unoda kushanyira mapopoma, kungave neherikoputa kana netsoka.
Ukafunga nezvenzira yekupedzisira iyi, uchafambisa nemumakiromita makumi maviri anoparadzanisa Livingstone kubva pakuwa uye unofamba kusvika wasvika pane inozivikanwa se «Dhiyabhorosi Piscinta«, Dziva rechisikigo raunogona kushambidza kana kuyerera kwakadzikira, sezvo mumwaka wemvura, unogona kusvika nhanho nhanho yemamita imwe mumaminetsi mashoma. Nzira yakanakisa yekutangira muparadhiso iyi kwaunogona kutarisa kunze kuti ufungisise muraraungu wawakaona usati wafarira zviitiko zvakawanda zvinotenderera kuVictoria Falls.
Mumwe wavo ndeye dzidzira bungee kubva kune yakakurumbira Iron Bridge, yakamiswa kupfuura mamita zana pamusoro porwizi. Imwe nzira yekusangana nekukanganiswa kwemapopoma nemutengo unonzwisisika, nekuti kana iwe uchida kubhururuka pamusoro pemapopoma ari mundege kana helikopta, mutengo unogona kusvika kusvika kumaeuro mazana matatu erwendo runosanganisira kuyambuka kubva kune rumwe rutivi uchienda kune rumwe. .imwe mune maminetsi. Mushure meizvozvo, hapana chinhu chiri nani pane kuve nedoro mune imwe yemabhawa akatarisa rwizi usati waedza kutora mifananidzo kubva ku 16 maonero vanosangana mugomba rakadzika-dzika.
Iko kune zvakare mukana wekuyambuka zambuko rambotaurwa rinobatanidza Zambia neZimbabwe, asi kuti uite kudaro iwe unofanirwa kuve uine vhiza yakawanda. Yakanaka kana iwe uchida kuona musiyano uripo pakati penyika mbiri dzakatsanangurwa nemaonero eiyo mapopoma.
Asi kana paine chimwe chinhu chinokwezva chaunofanira kusangana nacho pakushanyira Victoria Falls, izvo zviri pachena mukana wekutora chikepe parwizi Zambezi, kunyanya pakuvira kwezuva. Yakanakira kunakidzwa nechunhu kugona kwemapopoma, rwendo rwacho runodhura madhora makumi matanhatu asi rwakakosha kwazvo kana zvasvika pakuona zvipembere kana mbizi dzakatarisa kunwa.
Panguva yekusarudza nguva yakanakisa yekufamba kuenda kuVictoria Falls zvinogara zvakanaka kuziva kuti mwaka wemvura unoitika kubva Zvita kusvika Kubvumbi. Munguva iyi kuyerera kweRwizi Zambezi kwakakwirira zvakanyanya, saka kushambira muDhiabhorosi Dhiabhorosi hazvigoneke uye kufashukira kwacho pachako kunokonzeresa makore emhepo zvekuti zvakatonyanya kuomarara kufungisisa chiitiko ichi chechisikigo. Nechikonzero ichi, tinokurudzira kuti iwe ushanyire mapopoma aya muna Chikumi kana Chikunguru, nekuti panguva yemwaka yakaoma inoitika kubva Nyamavhuvhu kusvika Mbudzi, kuyerera kwacho kunogona kuderedzwa. Nekudaro, uye kunyangwe paine zvakasarudzika, chero nguva yakanaka kushanyira Victoria Falls.
Nakidzwa nezuva muparadhiso uye ufare mune mukana wekutarisa runako rwemaguta senge Livingstone kana kunyange book husiku kuti ugare pane imwe yemahotera mazhinji munzvimbo iyi. Unogona here kufungidzira uchinzwa ruzha rwemapopoma usiku usati warara? Kana zvichibvira.
Victoria Falls ndeimwe yemafaro makuru eAfrica uye inova nzira yakanakisa yekubatana nezvimwe zvinokwezva muhafu yekumaodzanyemba kwekondinendi. Tora mukana uye ubatanidze neChobe National Park, iyo nzvimbo inounza pamwechete huwandu hukuru hwenzou munyika Botswana, inoenderera kusvika Okavango Delta neshumba dzavo dzekushambira kana kuenderera kusvikira Namibhiya, iyo nyika uko iyo Gwenga reNamib inoumba nzvimbo yakasarudzika.
Zvikasadaro, iwe unogona kugara uchitora mukana wekuwana zvirinani South Africa, iyo nyika uko mapaki akaita seKruger neBig Five ayo anova nzira yakanakisa yekubatana neVictoria Falls kuitira kuti uwane rwendo rweupenyu.
Ungada here kushanyira Victoria Falls?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Chii chekuona kuVictoria Falls
Zvokuita mumusha weRocío